छोरी जायराले अचानक बलिउड छाड्ने निर्णय गरेपछि आमिर बेखुस, सम्झाउने प्रयास गर्दै « OsNepal News
छोरी जायराले अचानक बलिउड छाड्ने निर्णय गरेपछि आमिर बेखुस, सम्झाउने प्रयास गर्दै
काठमाडौं । जायरा वसीमले अचानक बलिउडको संसार छाड्ने निर्णय लिएपछि सबै आश्चर्यजक परेका छन् । बलिउडमा उनका धेरै प्रशंसकले उनलाई सहानुभूति देखाउँदै यो उनको व्यक्तिगत फैसला रहेको भन्दै यसको सम्मान गरिनुपर्ने बताएका छन् । तर आमिर खान भने जायराको यो फैसला प्रति असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । उ नी अहिले जायरालाई सम्झाउने प्रयासमा छन् । स्रोतका अनुसार जायराले यो निर्णय आवेशमा आएर गरेकी हुन् ।
दंगलको शुटिङको क्रममा पनि जायराले धेरै समस्याको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यतिबेला उनको ट्रोल पनि बनाइएको थियो । तर, आमिरले उनलाई साथ दिएका थिए । पछि पछुतो हुने गरी कुनै निर्णय नगर्नका आमिरले सुझाब दिएका हुन् ।
यसैबीच जायराले आफ्नो आगामी फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’का निर्मातासँग पनि आफूलाई फिल्म प्रमोशनको हिस्सा नबनाउन आग्रह गरेकी छिन् । यो फिल्ममा जायराका साथै फरहान अख्तर र प्रियंका चोपडाजस्ता ठूलो अनुहार पनि देखिने छ । यो फिल्म ११ अक्टोबरमा रिलिज हुनेछ ।
पछिल्लो समयमा राम्रा र स्तरिय गीत सुन्न नपाएको धेरै स्रोता र दर्शकको गुनासो छ ।
काठमाडौँ : सांगीतिक क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल नाम हो गायिका सोना अमात्य। दर्जनौ चर्चित
रोमान्सको साथमा फाईट भएको हिरो नं. १ को तेश्रो गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)
काठमाडौं । नायक जय किशन बस्नेतले निर्माण गरेको प्रदर्शोन्मुख चलचित्र “हिरो नं. १” को तेश्रो